Diiwaangelinta, Codaynta Hore, iyo in ka badan! Dhammaan su'aalahaaga cod bixinta, waa laga jawaabay. - Cuntooyinka giraangiraha
Diiwaangelinta, Codbixinta hore, iyo inbadan! Dhammaan su'aalahaaga codbixinta, waa laga jawaabay.
Maalinta doorashadu waa Nofeembar 6 ee sanadkan, waxaanan rabnaa inaan hubinno inaad ogtahay wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato doorashooyinka sannadkan. Nidaamka codbixinta ayaa mararka qaar jahwareer keeni kara, sidaa darteed waxaan soo uruurinnay macluumaad hoose oo ku saabsan sida loo diiwaan geliyo codbixinta iyo sidoo kale siyaabaha kala duwan ee aad u codeyn karto. Hoos waxaa ku jira macluumaad qaas ah oo loogu talagalay kuwa laga yaabo inay leeyihiin arrimaha dhaqdhaqaaqa, ama kuwa aad rabto inaad si fudud u codeyso oo aad uga fogaato doorashooyinka maalinta Doorashada.
Haddii aad qorsheyneyso inaad ka codeyso goobta doorashada Maalinta Doorashada markaa waa inaad isdiiwaangelisaa. Waxaa jira qaabab badan oo loo diiwaan geliyo si loo codeeyo, oo ay ku jiraan Maalinta Doorashada. Markaad isdiiwaangaliso kahor Maalinta Doorashada uma baahnid inaad ka walwasho inaad keento dukumiinti cadeynaya deggenaasha goobta doorashada, waxayna xawaareyn kartaa khibraddaada codbixinta maalintaas. Haddii aadan hubin haddii aad horay isu diiwaangelisay, waad hubin kartaa heerka diiwaangelintaada halkan.
Ikhtiyaar fudud, kaliya gal internetka oo isdiiwaangali si aad u codeyso. Si aad iskaga diiwaangeliso khadka tooska ah waxaad u baahan tahay inaad keento cinwaan emayl, iyo liisanka darawalnimada ee Minnesota / kaarka Aqoonsiga Minnesota / afarta lambar ee ugu dambeeya ee lambarka sooshalka.
Ikhtiyaar kale oo sahlan oo diiwaangelinta cod-bixiyeyaashu waa boostada. Si fudud u soo dejiso oo u qor arjiga, ka dib ama ku soo dir ama ku soo dir haddii aad ka baxdo xafiiska doorashada degmada ama halkan:
60 Boqortooyada Dr.
Codsiga warqadda waxaa lagu bixiyaa luqado badan, iyo sidoo kale xulasho daabacan oo ballaaran.
Haddii aadan awoodin inaad isdiiwaangaliso inaad codeyso kahor Maalinta Doorashada, ha walwalin! Waxaad iska diiwaan gelin kartaa inaad ka codeyso goobtaada doorashada Maalinta Doorashada. Si aad isu diiwaangeliso Maalinta Doorashada, waa inaad keentaa caddeyn joogitaan. Liis dukumiintiyo la oggolaaday / siyaabo lagu caddeeyo joogitaan ayaa laga heli karaa halkan.
Maalinta ugu dambeysa ee la isku diiwaan geliyo boostada ama khadka tooska ah waa Oktoobar 16.
Siyaabaha loo Codeeyo
Codeynta Maalinta Doorashada
Haddii aad doorato inaad si shaqsi ah u codeyso maalinta Doorashada, tallaabada ugu horreysa waa inaad hesho meesha ay doorashadaadu ku taal. Halkan waa meesha aad ka heli karto macluumaad ku saabsan halka laga codeynayo. Inta badan goobaha codbixinta waxay furan yihiin 7da aroornimo ilaa 8 fiidnimo Ilaa iyo intaad safka kujirto 8da fiidnimo, waad awoodaa inaad codeyso.
Haddii aad jeclaan lahayd ama aad u baahan tahay wax caawimaad ah inta lagu jiro codbixinta waxaa jira xulashooyin badan. Waad soo kaxaysan kartaa xubin qoyska ka mid ah, saaxiib, ama deris, si ay kaaga caawiyaan qayb ama dhammaan qaybaha codaynta. Mashiinka calaamadaha codbixinta ayaa sidoo kale la heli karaa si uu kaaga caawiyo in hawsha cod-bixinta ay kuu sahlanaato. Mashiinkaan ayaa kuu calaamadeyn kara warqada codbixinta, wuxuu ku tusi karaa warqad codeyn ah oo daabac weyn, wuxuuna kugu akhrin karaa warqada codbixinta adiga oo adeegsanaya sameecadaha dhagaha Mashiinku wuxuu ku shaqeeyaa isagoo buuxinaya warqadaada codbixinta adoo adeegsanaya boodhadhka Braille, shaashad taabasho ama kabbasho-iyo-puff. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kaalmada codbixiyaha waxaad ka heli kartaa boggan. Haddii aad caawimaad u baahan tahay goo ku mashquulsan doorashooyinka maalinta Doorashada, halkan waxaad ka heli kartaa adeegyo dadka siiya caawinta gaadiidka. Shirkadaha sida Uber iyo Gacanta ayaa sidoo kale bixiya raacyo bilaash ah oo qiimo jaban goobaha codbixinta maalinta doorashada.
Macluumaadka ku saabsan xuquuqdaada ayaa ku yaal tan bogga xuquuqda codbixiyaha.
Haddii aad aadeyso goobaha codbixinta Maalinta Doorashada ma ahan ikhtiyaar adiga ama waxaad dooneysaa inaad iska ilaaliso fowdada iyo khadadka maalinta doorashada, maqnaanshaha (ama hore) codbixintu waxay noqon kartaa xulashada kugu habboon adiga! Haddii aad dooratid inaad codkaaga ka dhiibatid codbixinta maqan sanadkan waxaa lagugula talinayaa inaad dalbato codeynta maqnaanshaha ka hor Jimcaha, Oktoobar 5. Waxaad ku maqnaan kartaa codka boostada ama shaqsi ahaan inta u dhexeysa Sebtember 21 iyo Nofeembar 5.
U codee doorashada sannadkan adiga oo ka raaxeysanaya gurigaaga! Si aad codbixinta maqnaanshahaaga ugu dirto boostada waxa kaliya ee aad samaynaysid ayaa ah inaad codsatid in warqadda codbixinta maqnaanshaha laguu soo diro, buuxi tilmaamaha markii aad hesho codbixintaada, ka dibna dib ugu soo dir boostada. Waxaad ku codsan kartaa warqaddaada cod-bixinta maqnaanshaha khadka tooska ah ama waxaad ku buuxin kartaa foomka warqadda oo ku soo celin kartaa foomkaaga xafiiska doorashada degmada boostada, fakiska, ama emayl ahaan. Ma aha in lagaa diiwaangeliyo si aad u codsatid warqadda cod-bixinta maqnaanshaha ah! Madaxa halkan wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan codeynta maqnaanshaha ee boostada iyo helitaanka arjiga codeynta maqnaanshaha. Markaad boostada ku dirto warqaddaada cod-bixinta maqnaanshaha waad awoodaa la soco xaalada codbixintaada.
Maqnaanshaha u codeynta shaqsi ahaan waxay kuu oggolaaneysaa inaad goor hore ka codeyso goobta loogu talagalay oo aad ka fogaato khadadka mashquulka ah Maalinta Doorashada. U codee adiga xafiiska doorashada degmada ama goobo kale oo loo qoondeeyey in lagu codeeyo qof ahaan maqnaanshaha. Uma baahnid in lagaa diiwaangeliyo, markaa haddii aanad hore isu diiwaangelin hubso inaad keento hal caddeyn oo ah joogitaan.
Macluumaadka ku saabsan codeynta haddii aad ka tirsan tahay militariga ama dibedda ayaa ku yaal boggan.
Maxaa ku jira warqadda codbixinta sannadkan?
Waad eegi kartaa warqaddaada codbixinta ee gaarka ah halkan.
Qof kasta oo reer Minnesota ah wuxuu ku lahaan doonaa waxyaabaha soo socda codkooda:
Senator Mareykan ah
Senator-ka Mareykanka (doorasho gaar ah)
Badhasaabka & Lt. Governor
Hanti Dhawraha Gobolka
Dadka qaar waxay ku lahaan doonaan waxyaabaha soo socda warqaddooda codbixinta:
Xubnaha Guddiga Dugsiga
Xubnaha Guddiga Isbitaalka
Xubnaha Maamulka Degmada Park
Su'aalaha doorashada maxaliga ah
Dhammaan macluumaadka ku yaal boostadan sidoo kale waxay ku yaalliin barta Xoghayaha Gobolka.
Oktoobar 15, 2018